Maxkamadda Hargeysa Oo Xukun Ku Riday Dad Lagu Eedeeyay Inay Xadeen Ilmo Yar | HAYAAN NEWS
Maxkamadda Hargeysa Oo Xukun Ku Riday Dad Lagu Eedeeyay Inay Xadeen Ilmo Yar
Hargeysa(Hayaannews)-Maxkamadda rafcaanka Hargaysa, ayaa laba qof oo lagu kala magacaabo Cabdiraxmaan Cabdillaahi Xasan iyo Khadra Cabdillaahi Maxamed midkiiba ku xukuntay labo sannadood iyo lix bilood oo xabsi ah, kadib markii lagu heley in ay ilmo ka xadeen qoys.
Lama oga ujeedka rasmiga ah ee ku kaliftay in ay ilmaha wataan, balse waxaa la qabaa tuhun ah in uu jiro suuq madoow oo carruurta looga ganacsado, waxaana arrintan sii xoojinaya Guuleed Dafac oo ah madaxa hay’adda xuquuqda aadanaha oo yidhi “Marka laga qiyaas qaato cabashooyinka dadka ka imanaya, dhoofinta carruurta waa ay badatay, waxayna ku dhacdaa dadka ciyaalka ah ee ka yar 15 jirka, dhibta jirtaa waxaa weeye sharcina noogama degsana, wacyiga dadkana aad ayuu u liitaa”.
Balse taliyaha booliiska Somaliland Cabdullaahi Fadal Iimaan ayaa BBC-da u sheegay in aanay ka warhaynin wax suuq madoow ah oo jira oo carruurta looga ganacsado.
Hooyadii dhashay ilmahan yar ee la xaday ayaa iyadu lafteeda ku baraarugsan suurtogalnimada in ilmaha dalka dibediisa loo dhoofiyo, waxayna muddo bil ah ka raadinaysay meelaha dadka laga tahriibiyo sida Boosaaso oo kale.”Garowe ayaan maray, Boosaaso ayaan tagay, 18 cisho ayaan meel buuro ah ku sugnaa oo aan wiilka ka raadinayay meelaha dadka laga tahriibiyo” ayay tidhi hooyada ilmaha dhashay.
Hooyada dhashay ilmaha ayaan ku qanacsanayn xukunka, waxayna sheegtay in aanay suurtogal ahayn in 2 sano iyo 6 bilood oo kaliya lagu xukumo dad ay sheegtay in ay doonayeen in ay ka ganacsadaan xubnaha jidhka wiilkeeda.
Ma jiraan wax tirakoob ah oo laga hayo carruuraha la xaday, waxaana ugu wacan “waalidiinta oo marka ay ilmaha waayaan, raadiya, kadibna ka quusta, dawladana aanan u sheegin” sida uu sheegay Guuleed Dafac.